सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली राजनीतिक मार्गचित्र कसरी अघि बढ्ला ! सत्ताँ समिकरण कस्तो बन्ला ? विस्तुतमा हेर्नुहोस् !
अब बन्ने सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा कि देउवाको ?
प्रकासित मिति : २०७७ फाल्गुन १३, बिहीबार प्रकासित समय : १३:२९
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मुलुक संसदीय अभ्यासमा फर्कन लागेको भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विभाजनसम्बन्धी अस्पष्टताले पुनर्स्थापित संसद्का कामकारबाही तत्कालै प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पौष ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मङ्गलवार असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।
अदालतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख सहितका नाममा १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश पनि जारी गरेको थियो।
अदालतको फैसला आएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहसहित विभिन्न दलहरूले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको समूहले आफ्नो भावी रणनीति तय गर्न बैठक गरिरहेको छ तर उनका सल्लाहकारले ओलीले राजीनामा नदिने बरु परिस्थितिको सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
उनले भने, “यो १३ दिनको समयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिन तोकेर संसद्‍को बैठक बोलाउन अनुरोध गर्नुपर्‍यो। पहिले नै दुईवटा अधिवेशनबीचको छ महिनाको अवधि पूरा भइसकेकाले अदालतले ढिलाइ होला भनेर जुन अग्रसरता लियो, त्यो राम्रो हो। अब बाँकी प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेर सम्पन्न गर्नुपर्छ।”
पहिलो बैठकपछि अहिले उठ्ने देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रस्तुत हुन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावसहितका सवालका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सभामुखले शीर्ष नेताहरू र कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरी संसद्‌को अर्को बैठकको मिति तोक्ने उनी बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पौष ५ गतेकै दिन नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै उक्त दलकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
भट्टराई उक्त अविश्वासको प्रस्ताव पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिए त्यसमा बढीमा एक हप्ताभित्र निर्णय आइसक्ने बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुईवटा खेमामा विभाजित नेकपालाई पुनः एकताबद्ध बनाउनुपर्ने धारणा दुवै समूहका कैयौँ नेताहरूले अदालतको आदेश आएलगत्तै राख्न थालेका छन्।
तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टी एकता गर्ने वा मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका थिए।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्‌मा विश्वासको मत लिने वा आफूलाई चुनौती दिइरहेको खेमाबाट प्रस्तुत हुने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने दुईवटा विकल्प छन्।
अधिकारी भन्छन्, “अविश्वासको प्रस्तावमा सबैभन्दा कठोर प्रकिया भनेको वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। अहिलेको नेकपाको छुट्टिएको समूहसँग त्यो क्षमता छ कि छैन भन्ने टड्कारो प्रश्न छ।”
उनले थपे, “जस्तो प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोला तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई कुनै फाइदा छैन। अर्कोतर्फ यत्रो आन्दोलन गरेको समूह नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा किन सरकारमा जान्छ भन्ने प्रश्न छ।”
“त्यसमाथि अहिलेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री ओलीसँग ुविशेषु रहेको भन्ने विवरणहरू आएका छन्। बरु अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नै नेपाली काँग्रेसको समर्थन लिएर संयुक्त सरकार चलाउने भन्नेतर्फ पनि जान सक्छ।”
अधिकारीको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन पनि गर्न सक्छन्। “दुइटैले अल्पमतको सरकार बनाउने र अर्कोले बाहिर बसेर समर्थन गर्ने भन्ने विकल्पमा पनि जान सक्छ।”
नेकपाका अध्यक्षले भावी सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी नरहने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुअघि बताउने गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन कुल सदस्य सङ्ख्या २७५ को बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुनुपर्छ।
अहिले नेकपातर्फ एक सांसदको पद रिक्त छ भने नेपाली कांग्रेसको र जनता दल समाजवादीका दुई दुई सांसद निलम्बित रहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेकपाका एक दुई सांसदले आफू कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
नेकपाको विभाजनसँगै प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षमा लगभग ९० जना र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लगभग ८० जना सांसद भएको विवरणहरू आएका छन्।
यो परिस्थितिमा नेकपाको दुवै पक्षलाई नयाँ सरकार गठनका निम्ति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य रहने देखिन्छ। बीबीसीबाट